कोरोनामा राजनीति « News of Nepal
मुलुकमा कोरोना भाइरसले जुन तीव्रताका साथ महामारीको स्वरूप लिँदै छ त्यही गतिले सरकार सञ्चालकहरु राजनीतिक खेलमा लागेका छन् । कोरोनासँग सामना गर्न जनताको साथमा हिँड्नुपर्ने बेला उनीहरु सत्ता जोगाउने तिगडममा लागेका छन् । संघदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक चतुर्‍याइँ र धुत्र्याइँका खेलहरु मञ्चन भएका छन् । विश्वासको मत लिनेदेखि अभियुक्तहरुलाई मन्त्री बनाउने र एकैदिन राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने राजनीतिक खेलहरु कोरोनाले तीव्र गति ग्रहण गरेकै बेला देखिएका छन् ।
कोरोना संक्रमण भयावह देखिन थालेपछि विभिन्न जिल्लामा धमाधम निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । बाँकेबाट शुरु भएको निषेधाज्ञा संक्रमण दर उच्च देखिएका उपत्यकालगायतका ४१ जिल्लामा लागू भइरहेको छ । यही १६ वैशाखदेखि दोस्रो लहरको निषेधाज्ञा शुरु भएको हो । निषेधाज्ञाले बढ्दो गतिमा रहेको संक्रमण एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरुको भनाइ रहेको छ । तर, निषेधाज्ञा नै सबै समस्याको समाधान भने होइन । निषेधाज्ञा भनेको अरू तयारी गर्न नभ्याइएको अवस्थामा समय जोहो गर्ने उपाय पनि हो । संक्रमणको शृंखला तोड्न पनि यो सहयोगी हुन्छ, तर यो बेला गर्नुपर्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको संक्रमित पहिल्याउने र उसलाई आइसोलेट गर्ने अर्थात अलग्ग राख्ने नै हो । सरकारका गतिविधि देख्दा अनुभवबाट सिक्नुको सट्टा यसमा निरीहता प्रदर्शन गरिसकेको छ । संकटका बेलामा सरकारले नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्नेमा उल्टै आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट सरकार पछि हटेको अवस्था छ । भारतमा संक्रमण व्यापक भइरहँदा यहाँ सावधानी वा तयारीको काम गर्ने थोरै भए पनि समय थियो, तर यसबीच पनि केही गरिएन । सरकारले व्यापारीहरू, गैरसरकारी क्षेत्र एवं सेनाकै समेत सहयोगमा टुँडिखेल, नारायणहिटी आदिका खुला जग्गामा अक्सिजन प्रवाहसहितका हजार जति बेडका अस्थायी संरचनाहरू खडा गर्न सक्छ । आवश्यक परे, भेन्टिलेटरका लागि वीर अस्पताल, सैनिक अस्पताल आदिमा व्यवस्था गर्न सक्छ । चिकित्सक, नर्सलगायत दक्ष जनशक्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । अहिले बाँकेस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर शिक्षण अस्पताल र अन्य केही अस्पताल कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा रूपान्तरित हुँदै छन् । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई संकटको घडीमा एउटै प्रवाहमा समाहित गर्न आवश्यक छ ।
कोरोनाजस्तो महामारी दु्रत तर शृंखलामा फैलिने गर्छन् । निषेधाज्ञा जारी गर्दा पनि त्यो शृंखला तोड्न सकिएन भने संक्रमण वृद्धिदर विस्फोटक हुन सक्छ । एक महिना अघिसम्म सय जनाको हाराहारी रहेको संक्रमणको वृद्धिदर आज दैनिक हजारौं नाघिसकेको छ । परीक्षणको दायरामै नआएका वा लक्षण नभएका संक्रमितमार्फत अझ भयावह रूपमा संक्रमण फैलिने सम्भावना देखिएको छ । संक्रमणदर बढ्दै जाने हो भने डरलाग्दो स्थिति बेहोर्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले अस्पतालमा बेड तथा सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधारको टेको नै नपाएर ज्यान जाने अवस्था आइरहेको सन्दर्भमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले, सरकार थप गैरजवाफदेही बन्नतिर नलागी नागरिकको जीवन जोगाउन राज्यको सम्पूर्ण तागतले भ्याएसम्मको प्रयास गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । जीवन बच्यो भने पछि कुनै दिन सरकार बनाउने र भत्काउने खेल खेल्दै गरौंला– सत्ताधारी मात्र होइन सबै राजनीतिक दललाई साझा अनुरोध !
छिमेकी मुलुकबाट सिकौं !
मास्क, मास्क र मास्क !
नेतालाई कुर्सी जनतालाई कोरोना
विवाह गरेको भन्दै जागिर छोड्न दबाब
जनता छटपटाउँदै बेडमा, राजनीतिक दल सत्ताको..
‘रअ’का नेपाल प्रमुख भट्नागर काठमाडौंमा
सुनचाँदी व्यवसायीका संस्थापक ज्ञानुराज रहेनन्
अस्पतालको बेड खोज्दै तनहुँदेखि धुलिखेलसम्म
काठमाडौंमा मात्र थप ३०८९ जनामा कोरोना..
उम्मेद्वारी दर्ता गर्न हेलिकप्टरद्धारा गृहमन्त्री थापा हेटौंडा प्रस्थान
ललिता निवास प्रकरण : दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदै
'रअ'का नेपाल प्रमुख भट्नागर काठमाडौंमा
टिकटक बनाउने क्रममा भीरबाट खसेर एकजनाको मृत्यु